Hojjattoonnisaa ‘qorichoota barbaachisoo’ qabatanii gara Tigraay balalii’uu dhorkamuu UN hime – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsHojjattoonnisaa ‘qorichoota barbaachisoo’ qabatanii gara Tigraay balalii’uu dhorkamuu UN hime
Balaliinsa deeggarsa namoomaa Dhaabbata Biyyoota Gamtoomanii (UN) jalqabaa Finfinneerraa gara Maqaleetti taasifameen hojjattoonni isaa ‘qorichoota barbaachisoo’ ta’e akka hin fudhanneef dhorkamu UNtti Waajjirri Qindeessaa Dhimmoota Namoomaa (UNOCHA)n beeksiise.
Dhaabbatichi ibsa Jimaata baaseen, balalinsi Adooleessa 22, 2021tti taasifameen hojjattoonni qoricha farra busaa, qoricha dhukkubbii wayyeessu, qoricha onnee fi sukkaaraa fi qorichoota bu’uuraa kana fakkaatan qabatanii akka hin deemneef waan dhorkamaniif hojjattoonni lama hafuusaanii beeksiiseera.
Hojjattoonni kunneenis qoricha kanneen adda kutuu waan hin dandeenyeef gara naannichaa imalu hin dandeenye jedhe.
Xiyyaricha Finfinneetti shakkata’insi cimaan mudate kan ture yoo ta’u, qorichoota dhuunfaa fi laaptooppii akkasumas ‘USB Drive’ meeshaalee hojii waliin walqabatan akka hin fudhanneef dhorkamu dhaabbatichi beeksiiseera.
Balaliinsa sanaanis hojjattoota gargaarsa namoomaa UN fi kanneen dhaabbilee idil-addunyaa irraa ta’an 34tu xiyyaarichaan fe’eme ture.
Tibba sanattis tokko tokkoo imaltootaatiif qarshiin gara Tigraayiitti qabatanii akka imalaniif hayyamameef doolaara 225 (birrii kuma 10) yoo ta’u, kunis turtii isaanii Tigraayiif gahaa miti jedheera dhaabbanni Motummoota Gamtomanii kun.
Kana malees naannichatti baankiiwwanii fi tajaajiloonni bu’uuraa kan biraa adda cituun haala cimseera jedheera.
Mindaan hojjattota mootummaa fi dhaabbilee gargaarsaa tokko tokkoo baatiiwwaniif kan hin kanfalamiin yoo ta’u, hir’inni maallaqaa kunis tajaajila deeggarsa namoomaa irratti danqaa uumuu ibseera.
Rakkina dhaabbatichi hojjattoota isaa mudachu ibse kana ilaalchises hanga ammaatti gama mootummaan wanti jedhame hin jiru.
Caamsaa 30, 2021 irraa kaasee naannoo Tigraayitti balaliinsi kamu akka hin taasifneef dhorkamulleen, mootummaan qaamoolee deeggarsa namoomaa dhiyeessuuf barbaadaniif hayyama addaa akka kennuufi balaliinsi isaa Adooleessa 5, 2021 irraa akka eegale ibsee ture.
Balaliinsii deeggarsa namoomaa UN Finfinnee irraa gara Maqaleetti torbaniitti al lama kan hayyamame ta’ulleen balaliinsa isa jalqabaatiin alatti mootummaa irraa hayyamni hin argamnes jedhameera.
Balaliinsa deeggarsa namoomaa mootummaan Itoophiyaa haala addaatti akka taasifamaniif hayyamu taasifamuun duras, ragaalee akka lakkoofsa balaliinsaa, gosa xiyyaaraa, kaayyoo balaliinsaa, tarree imaltootaa fi gosa fe’iinsaa dhiyeessuun mirkanneessa argachuu akka qabaatan ibsamunsaa ni yaadatama.
Kanaan alattis xiyyaaroota, Buufata Xiyyaara Boolee qubataniifi irra ka’aan akkasumas kaargoowwan fi imaltoota irratti hojjattootaan sakkata’iinsii fi qorannoon akka taasifamu qajeelchi kaa’ameera.
Akkasumas kaargoowwan gurguddoonnis saaqamun yoo barbaachiseetti kun hojiirra akka oolfamu fi sakkata’insi idileefi sadarkaa isaa eeggate kan irratti raawwatamu ta’us himameera.
Tigraayitti erga waraanni eegalee kaasee jiraattoonni naanichaa milyoona 2.1 ta’an manasaanii dhiisuun baqachuuf dirqamaniiru.
Akkasumas jiraattoota naannichaa keessaa kanneen harka 90 ta’an deeggarsa nyaataa akka barbaachisu dhaabbilee deeggarsaa ni himu.
Namoonni kuma 400 tahan deeggarsa barbaachisaa tahe yoo hin arganne, balaa beelaaf saaxilamuuf akka jiran Sagantaan Nyaataan Addunyaa beeksiseera.
Gara galgalaa kana ammoo warri UN Higher Human Right commissioner dirqama Abbootii Gadaatiin Wal arguu
Gara galgalaa kana ammoo warri UN Higher Human Right commissioner dirqama Abbootii Gadaatiin Wal arguu…
UNGA stakeout after guilty verdict in UN bribery trial- now UN wants
UNcensored Day 522/206: UNGA stakeout after guilty verdict in UN bribery trial- now UN wants…